Ọnye na -bụ Chen Jiali?
Ọnye na -bụ Chen Jiali? Ọ ga -enwerịrị akụkụ igwe igwe ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ mara ya, o nwere igwe ịkwa akwa na -arụ ọrụ ị nweta ihe na afọ 12 na ningbo YAMATO, onye isi ụlọ ọrụ Ningbo Original Company - ọ bụ ndị Northerners ， mana ọ dị ka ndị ndịda. ...
Ịga ihe ngosi ahụ
Kemgbe “COVID-19” gbasara gburugburu ụwa, ihe ngosi ọdịnala buru ibu na-anọghị n'ịntanetị anọwo na-emetụta. Na ọkara mbụ nke 2020, a kwụsịtụrụ ihe ngosi niile. Ọ bụ ụzọ maka ụlọ ọrụ iji gbasaa ahịa ọhụrụ site na isonye n'ihe ngosi, nke bụ m ...
Jikọọ na Alibaba
Alibaba International bụ ikpo okwu e-commerce mbubata na mbupụ, Ọ bụ obodo mgbanwe azụmaahịa kacha ukwuu n'ụwa na ahịa azụmaahịa n'ịntanetị.n'ihi iji nyere ụlọ ọrụ aka azụmaahịa azụmaahịa mba ofesi, ịgbasa ndị na-azụ ahịa na mba ofesi. Ebe ...